ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ / ကလေးပစ္စည်းများ / ကလေးအရေပြားစောင့်ရှောက်မှု
Super Kiddy Wet Tissue 20pcs
မူရင်းဈေး 500.00 ကျပ်
ဈေးနှုန်း 500.00 ကျပ်
Super Kiddy Baby Wipe လေးကဆိုရင် ရှားစောင်းလက်ပတ်အနံ့၊ အနံကင်း (Fragrance Free) ဆိုပြီး ၂ မျိုးထုတ်လုပ်ထားပြီး ရှားစောင်းလက်ပတ်အနံ့အတွက် ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ တကယ့်ရှားစောင်းလက်ပတ်စစ်စစ်ကို အသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို အနံ့အားဖြင့်သာမက ရှားစောင်းလက်ပတ်ရဲ့ အသားအရေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အာနိသင်များကိုပါ ရရှိခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
GOAT MILK BATH 750 ML.
မူရင်းဈေး 7,800.00 ကျပ်
ဈေးနှုန်း 7,800.00 ကျပ်
STRETCHMARK CREAM 200G
မူရင်းဈေး 14,000.00 ကျပ်
ဈေးနှုန်း 14,000.00 ကျပ်
Super Kiddy Wet Tissue 80pcs
မူရင်းဈေး 1,850.00 ကျပ်
ဈေးနှုန်း 1,850.00 ကျပ်
BABY LOTION 225 ML. (NEW)
မူရင်းဈေး 4,650.00 ကျပ်
ဈေးနှုန်း 4,650.00 ကျပ်